ITourism Seychelles ibamba umhlangano wokuqala wokumaketha wango-2022
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Seychelles » ITourism Seychelles ibamba umhlangano wokuqala wokumaketha wango-2022
ITourism Seychelles iqale unyaka ngochungechunge lwamasonto amabili lokubonisana kusukela ngoMsombuluko, Januwari 24, 2022, nabalingani bayo basekhaya nabamazwe ngamazwe mayelana nesu lokumaketha lonyaka.
Umcimbi waminyaka yonke wokubonisana, kulo nyaka, owenzeka cishe, osesimweni sewebhu ye-inthanethi kusetshenziswa inkundla yomhlangano eku-inthanethi ye-ZOOM, uhloselwe ukuqoqa imibono namazwana avela kubalingani bendawo bezohwebo ngesu lokumaketha laleyo ndawo.
Omunye wemicimbi ebaluleke kakhulu yabamele ezokuvakasha e-Seychelles nakwamanye amazwe, umhlangano uhlanganisa ozakwethu ukuze kuxoxwe ngezinkinga ezahlukahlukene ezihlobene nokumakethwa kwendawo okuyiwa kuyo ngo-2022.
Indawo, eqophe ukufika kwezivakashi eziyi-182,849 ngo-2021, inyuke ngo-59% uma kuqhathaniswa no-2020, ezuzwe ngokwezibalo zesikhashana ezikhishwe yiBhange Elikhulu, imali elinganiselwa ku-USD 309 wezigidi kanye nemali yesivakashi ngasinye engu-USD1,693. Kuhloswe ngayo ukuheha izivakashi eziphakathi kuka-218,000 kuya ku-258,000 kanye nemali yesivakashi ngasinye echitha ama-USD1,800 ngo-2022.
Ehambele lo mhlangano, uNgqongqoshe Wezangaphandle NezokuVakasha uMnu. Sylvestre Radegonde, kanye noNobhala Omkhulu Wezokuvakasha, uNkk Sherin Francis, bethula izinkulumo zosuku.
Enkulumeni yakhe, uNgqongqoshe Wezokuvakasha unxuse ababambisene nabo ukuthi bagxile ekuthuthukisweni kwendawo okuyiwa kuyo.
“Ake sibheke ukuthi yimiphi imikhiqizo namasevisi esiwanikeza izivakashi zethu. Akuyona imfihlo ukuthi izifiso zabavakashi bethu nabahambi zishintshile. Ukubizwa kolwandle, ilanga nesihlabathi akusanele ngokwazo. Lokhu kuveza ithuba elikhulu kwabakwaSeychellois. Sifuna ukukhuthaza imibono emisha kanye nabasanda kungena kwezokuvakasha. Uhulumeni udala imvelo futhi agqugquzele ukuhlukahluka, kodwa nguwe osomabhizinisi nosomabhizinisi okufanele nikhombise ukuyilangazelela,” kusho uNgqongqoshe uRadegonde.
Unobhala Omkhulu Wezokuvakasha ukhumbuze bonke ababambiqhaza ukuthi ithimba leTourism Seychelles lisazibophezele ekuhlosweni kwalo lokuthuthukisa umnotho waseSeychelles libe lihambisana nezinjongo zalo zokusimama.
“Yize sisalulama ekushaqekeni kwalolu bhubhane, singakhohlwa ukuthi nathi sisemjahweni wokusinda kwethu. I-Seychelles iyisizwe lapho ababili bethu bomuzi ngamunye bethola imali yokuziphilisa embonini yezokuvakasha nalapho yona le mboni incike ebuhleni bayo bemvelo kanye nesimo sezulu esikahle. Akumele sikhohlwe isidingo sokugcina ukusimama kuyingqikithi ku-ajenda yethu,” kusho uNkk Francis.
Ubuye waveza ukuthi umzamo wethimba otshalwe yibo bonke ababambisene nabo okubandakanya uhulumeni nezinye izinhlaka kwenze indawo okuyiwa kuyo yakwazi ukubuyisela cishe amaphesenti angama-50 ebhizinisi layo lango-2019, okusewunyaka ohamba phambili ngokwezibalo zabavakashi abafikayo.
Izingxoxo bezibandakanya izethulo ezivela kuMqondisi-Jikelele Wezokumaketha Kwendawo UNkk. Bernadette Willemin kanye noMqondisi-Jikelele WezokuHlelwa Kwezindawo Zokufikela Nokuthuthuka, uMnu. Paul Lebon.
Ngakolunye uhlangothi, uNkk Willemin ubalule ukuthi izibalo zokufika kwesivakashi zika-2021 zikhuthaze kakhulu. Ubalule ukuthi phakathi kwezingqinamba indawo okuyiwa kuzo ebhekene nazo ngenxa yodaba lwenhlanzeko emhlabeni wonke, ithimba lizobe ligxile emizamweni yalo yokwandisa ukufinyelela endaweni ngamasu ahlukene.
“Kafushane, sigxile emizamweni yethu yokumaketha ekuhlukaniseni iphothifoliyo yethu ngokucabangela imithombo ebalulekile yezingxenye zamakhasimende kodwa futhi sihlukanise ezinye izimakethe zethu ngaphandle kokudebeselela ukutshalwa kwezimali kwethu ezimakethe zethu ezivamile. Sikholelwa ukuthi iSeychelles inendaba emnandi okufanele siyixoxe futhi ngenxa yalokho sizodinga ukuletha okungcono kakhulu, ukwenza ukumaketha kwethu kube ngokwakho ukuze siqinisekise ukuthi sifinyelela izethameli zethu ngolwazi olufanele nangesikhathi esifanele,” kusho uMqondisi-Jikelele kwezokukhangisa.
Emasontweni amabili ezayo, abaphathi bezokukhangisa beTourism Seychelles, kanye nabameleli abavela emhlabeni wonke bazokwethula izinhlelo zabo namasu onyaka ka-2022 kumalungu okuhweba endawo ngamaqembu amancane noma imihlangano yomuntu ngamunye.
Zonke izikhathi zisingathwa nguMqondisi-Jikelele Wezokumaketha uNkk. Bernadette Willemin ozosizwa yimenenja yemakethe nabameleli abafanele. Umhlangano uzophela ngoLwesihlanu, February 4, 2022.
Marketing Seychelles Ezokuvakasha
I-IATA: Ukutholwa kwesidingo sabagibeli kwaqhubeka ngo-2021 kodwa i-Omicron inomthelela
Ibhodi elisha elikhethelwe Amalungu Angaphansi kwe-UNWTO
Ulwazi Olusha Ngokukhwehlela Okungapheli ku-Idiopathic...
I-Saint Lucia iphetha ukuhlolwa kwabahambi abagonyiwe, ngaphambi...
Ukuhlaziywa Okujulile Kwemakethe Ye-Barium Sulphate, Ukukhula...
I-Easter Escape at Hotel Arts Barcelona: Mediterranean...
I-Macaroni Grill Isetha Ithrendi Entsha Yokwengeza...
Amathiphu Asebenzayo Okwenza Ukuhamba Kubukeke Kukuhle ku-Resume Yakho
Khumbula Ukudla: Imbewu yePoppy ngenxa yeSalmonella
Ingxoxo Ekhethekile: I-Aerolineas Argentinas kanye...
Abaholi bezenkolo bomhlaba bahlangana eSaudi Arabia okokuqala ...
Imakethe yezokuvakasha eku-inthanethi izofinyelela ku-$765.3 billion...
I-IATA: Ukubuyiselwa kwesidingo esinamandla ngoJanuwari kube nomthelela...
Bangaphezu kuka-120,000 abantu abahlangana eBrussels eBelgian...
Umbukiso we-Bahamas e-Sun Sentinel Prime Expo a Huge...
I-Greater Toronto Airports: Umsebenzi wabagibeli ubusuphelile...
Iziguli ze-Crohn's Disease Ebonisa Imiphumela Engcono
Isiguli Sokuqala Selashwe Esivivinyweni Sokuhlinzwa Kwangemva Kokuhlinzwa...
UKhomishana we-Martinique Tourism Authority umemezele...
I-Cathay Pacific: Indiza entsha ye-NYC-Hong Kong izoba ...
UKevin Deeb uthi:
Januwari 29, 2022 ngo-05: 54